Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo laga codsaday in uu taageero hoos u dhigidda faa’iidada deymaha – The Voice of Northeastern Kenya
Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo laga codsaday in uu taageero hoos u dhigidda faa’iidada deymaha
Qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha siyaasadda ee dalka ayaa u xusul duubaya in la dhaqan galiyo hindise sharciyeed lagu doonayo in lagu xakameeyo qiimaha faa’iidada dul saarka ah ee lagu qaato lacagaha deymahaah ee la bixiyo.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa la kulmaya cadaadis xoogan oo ku aadan in uu qalinka ku duugo sharcigaas dhawaan ay ka doodeen xildhibaannada golaha sharci dajinta ee baarlamaanka.
Hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ugu weyn dalka ee CORD Raila Odinga ayaa soo dhaweeyay hindisahaasi isagoo madaxweyne Kenyatta ku boorriyay in uu dhankiisa ka taageero isla markaasna uu saxiixo.
Mr Odinga ayaa masuulka ugu sareeya dalka u sheegay in uu ka dhabeeyo balanqaadkii uu horay u sameeyay isbahaysiga talada haya ee Jubilee kaasoo ku qotomay in hoos loo dhigi doono qiimaha faa’iidada deymaha.
Horay ayaa waxaa sidaasoo kale hindisahaan sharciyeed usoo dhaweeyay ururka ay ku bahoobeen shaqaalaha dalka ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaanno COTU.
Xeerkaasi dhaqan galintiisa loo xusul duubayo ayaa ku amraya dhamaan bangiyada ka howl gala dalka in aysan dul saarka faa’iidadada deymaha ka badinin 4% oo lagu saleynayo qiimaha bangiga dhexe ee Kenya.
← Hogaamiyeyaasha Machakos oo cambaareeyay fal uu nin xaaskiisa gacamaha uga gooyay
Hal askari oo dhaawac kasoo garaay kadib markii bam lagula egtay Countiga Lamu →